Toerana manerana an'izao tontolo izao hankalazana ny Fetin'i St. Patrick | Vaovao momba ny dia
El Andron'i Saint Patrick ankalazaina eran'izao tontolo izao ny 17 martsa. Izy io dia maodelin'i Irlanda, saingy marina fa misy Irlandey erak'izao tontolo izao, ary ny fety toy izao, feno loko maitso sy labiera, dia ankalazaina any amin'ny firenena maro kokoa. Na izany aza, ny fiandohan'ity festival ity dia ara-pinoana, ho fahatsiarovana ny fahafatesan'i Saint Patrick, izay maty tamin'ny 461.
Misionera i Saint Patrick, noheverina ho mpisava lalana nitondra ny Kristianisma tany Irlandy. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary fomban'i Irlandy, ary ny Ny 17 martsa dia efa fialantsasatra izay ankalazaina manerana ny nosy, indrindra ny renivohitra Dublin, izay misy fety mandritra ny andro maromaro ary mandray mpitsidika bebe kokoa mitady fahafinaretana amin'ireo andro natokana ho an'i Saint Patrick.
2 Kilkenny, Irlandy
3 Limerick, Irlandy
4 New York, Etazonia
5 Boston, Etazonia
6 Chicago, Etazonia
7 Munich, Alemana
8 Masindahy Patrick any Espana
Ny Fetiben'i St. Patrick dia efa andrim-panjakana any Irlandy, ary ao amin'ny renivohiny, Dublin, dia ankalazaina tsy misy toy izany. Nandritra ny andro maro dia nitafy ny arabe sy ny olona ny emeraoda maitso mampiavaka an'i Saint Patrick, miaraka amina satroka somary mampihomehy izay mifangaro ao anaty vahoaka satria mitafy azy ny tsirairay. Ny iray amin'ireo toerana be olona indrindra dia tsy isalasalana fa ny Temple Bar, ny fidirana an-dalambe pub, na dia azo antoka aza fa hahita olona maro hafa manodidina ny tanàna. Ankoatry ny fankafizantsika an'i Guinness, afaka mankafy ny diabe marobe sy hetsika ary fialamboly eny an-dalambe isika.
Raha tia mozika isan-karazany ianao, fa indrindra ny nentim-paharazana na irlandey, ny toerana hankalazanao an'i Saint Patrick dia Kilkenny. Amin'ity tanàna Irlandy ity dia mankalaza ny andron'ny mpiaro azy ireo amin'ny maro izy ireo hetsika mozika. Kaonseritra mivantana, mozika ao amin'ny trano fisotroana sy atrikasa hahalalako bebe kokoa momba ny fomban-drazana mozika Irlandey, nandro daholo, mazava ho azy, niaraka tamin'ny labiera sy whisky Irlandy tao amin'ny trano fisotroany.
Raha te-hanao filokana ianao, dia manana fomba hafa samihafa hankalazana an'i Saint Patrick any amin'ny tanàna hafa any Irlandy, lavitra ny korontana eto an-drenivohitra. Ao Limerick izy ireo dia natokana hazakaza-tsoavaly hankafy ity fetim-pirenena ity. Eo anelanelan'ny sabotsy sy alahady dia hazakazaka fito no atao isan'andro. Tsy misy isalasalana, fomba iray tany am-boalohany hankalazana an'i Saint Patrick.
Any ivelan'i Irlandy, fantatsika fa ny toerana nanaovan'izy ireo tamim-pahamendrehana ity fankalazana ity dia tany Etazonia, izay misy maro Mpifindra monina Irlandey. Any New York dia manao matso miloko izy ireo hankalazana ity andro ity, ary manana fomba amam-panao mahafinaritra sy mahaliana ihany koa izy ireo izay tsy maintsy raisinay mba tsy ho fampitahorana fotsiny. Ireo izay tsy miakanjo maintso dia hahazo kely kely amin'izy ireo, ka tsara ny andro hivoahana ireo akanjo maitso ananantsika ao anaty lalimoara ireo.
Na dia ny antoko izay mandeha erak'izao tontolo izao amin'ny diany izao dia any New York, any Etazonia kosa dia voalaza fa ny voalohany mankalaza azy Avy any Boston izy ireo, ary koa toerana tsara hankafizana ny Andron'i Saint Patrick. Tanàna iray izay mandray ity fety ity ho fomba amam-panao marina iray izay ahitan'izy ireo azy, mitondra ireo valizy sy akanjo mahazatra Irlandy eny an-dalambe mandritra ny iray andro. Matso, fety ary fisotroana misy zava-pisotro mahazatra no misotro labiera amin'izany andro izany.
Tsy manana ny diabe lehibe indrindra i Chicago, fa manao zavatra kosa ny mahita azy. Isan-taona amin'ity Fetin'ny St. Patrick ity, mandoko ny renirano amin'ny loko maitso emeraoda, ho fanajana ny olo-masina. Raha tsy misy fisalasalana dia seho hafa sy mampihomehy izy io.
Na dia malaza kokoa aza ny Oktoberfest ao Munich, ny tena izy dia tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny fety anaovana ny zava-pisotro ny protonista ny alemà. Ka amin'ity tanàna ity dia fantatro ihany koa manao matso izy ireo miaraka amin'ny pipers sy Guinness ao amin'ny bara.
Masindahy Patrick any Espana
Any amin'ny firenentsika dia tsy dia misy fomban-drazana masin'i Saint Patrick, ary izay no antony fety tsy ankalazaina amin'ny toerana rehetra, mainka fa fialantsasatra no resahina. Na eo aza izany dia mihabetsaka ny trano fisotroana sy fisotroana misy azy, izay amin'ny faran'ny herinandro izay mifanojo amin'ny fety dia misy karazana satroka maintso ary azonao atao manandrama Guinness. Any amin'ny tanàn-dehibe dia tsy isalasalana fa toerana maro hankalazana ity festival ity, izay misy ny raffles sy ny toerana maitso voaravaka. Na dia tsy fomban-drazana be mpanaraka aza izany dia lasa antoko hafa raisintsika avy any amin'ny firenen-kafa mba hanana fotoana iray hiarahana amin'ny antoko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Toerana manerana an'izao tontolo izao hankalazana ny Andron'i St. Patrick